I-china Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 ulayini wokukhiqiza owenziwe ngokhonkolo wezemvelo ifektri nabakhiqizi | UJuda
I-Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 imigqa yokukhiqiza i-lime kuhilo enezemvelo
Imingcele yobuchwepheshe netafula lokusebenza
Indawo ehlala kuyo
I-Anthracite, i-2-4cm, inani lekhalori elikhudlwana kune-6800 kcal / kg
Amalahle ajwayelekile angama-125-130 kg we-1 ton lime
Isakhiwo sensimbi sangaphandle nolwelwesi lomlilo
Ibhande elihambayo eline-hood
Ukusabalalisa itshe lamalahle nelikalika
Izinhlangothi ezine Zikhipha
Ukususwa kwesishingishane se-cyclone + i-radiator yamapayipi amaningi + ukukhishwa kothuli esikhwameni + ukususwa kothuli lwamanzi ifilimu
Ukulawulwa kwekhompyutha okuzenzakalelayo ngokuphelele
1 opharetha wokulawula uhlelo;
1 isisebenzi sethonsi;
Umsebenzi o-1 wesondlo;
1 umshayeli wokulayisha
Izinsuku zokusebenza eziyi-120-150 ezisebenzayo
Izidingo zenkomba yamatshe ekalika
Usayizi ofanayo futhi ohlanzekile
Ayikho impuphu yamatshe, akukho daka eliphuzi ebusweni bamatshe
Izidingo zenkomba yamalahle
Inani le-Net Calorific
Awekho amalahle ayimpuphu
Izinga lekhwalithi ye-Lime
i-caustic soda /%
Umsebenzi / mL
1, Umthamo wokuklama owenzelwe ngamathani ayi-100-300 we-lime esheshayo ngosuku. Ububanzi bomzimba kuhhavini bukhethwe ukuthi bube yi-4.0 -6.0meters, ububanzi bangaphandle bungu-6.5 -8.5meters, ubude obusebenzayo bomzimba wesithando ngamamitha angama-30-33 kanti ukuphakama okuphelele kungama-38-45meters.
2, I-limestone eluhlaza namalahle avela ezimayini nasezimayini eziseduze ezinganciphisa izindleko zokuhamba.
3, Stone usayizi kuyizinhlayiyana: 30mm-60mm, 40mm-80mm, 50mm-100mm
4, Itshe namalahle kukalwa ngokunembile ngesisindo sezinzwa
Okokusebenza okukhanyelayo kulolu hlelo ungqimba olulodwa lwe-firebrick + ungqimba olulodwa lwesitina esibomvu + ungqimba olulodwa lwe-aluminium silicate fiber ezwe + i-slag yamanzi.
Uthuli nentuthu equkethe uthuli yamukela inqubo yokususa uthuli yomqoqi wothuli + nomqoqi wesikhwama ngohlobo lothuli + wamanzi wefilimu owokuqothula uthuli. Ngemuva kokwelashwa, uthuli luyakhishwa ngokuhambisana ngokuqinile namazinga okwamukelwa kwendawo.
7 、Isabelomali sisukela ebhakedeni lokunquma (ukuqala) kuye ku- lime ukukhipha ibhande (isitopu), ngaphandle kwesisekelo somlilo, isisekelo sokubhaka kanye negumbi lokulawula ugesi
Isistimu ye-batcher: itshe namalahle kuhanjiswa ngokulandelana kuya emabhakedeni enqolobane yamatshe namalahle ngamabhande; Itshe elinesisindo bese lifakwa ebhande lokuxuba ngokusebenzisa i-feeder. Amalahle alinganisiwe angena ebhandeni lokuxuba ngokusebenzisa i-flat belt feeder.
Uhlelo lokuphakela: itshe namalahle agcinwe ebhandeni elixubekile kuyiswa ku-hopper, eqhutshwa yi-winder ukwenza i-hopper ijikeleze iye phezulu naphansi ukuze ifake, okuthuthukisa ivolumu yezokuthutha futhi kufinyelele ekusebenzeni okuphezulu nokonga amandla.
Uhlelo lokukhishwa kwe-Lime: ngemuva kokuthi itshe le-lime elibaliwe lipholile, umcako ophelile ukhishelwa ebhandeni elikhipha umcako ngomshini wezinhlangothi ezine okhipha izingxenye kanye nezingxenye ezimbili ze-valve yokukhiya umoya. Uma kwenzeka kudubula, inkomba kanye nenani lokukhishwa kukalika kungalungiswa ukuze kutholakale ukudubula kanye nokudonsa umnyombo.
Isistimu yokususa uthuli: ngemuva kwesiphephetha-moya esenziwe ngothuli, uthuli oluqukethe intuthu negesi kuqala ngokusebenzisa umqoqi wothuli ukuze kususe izinhlayiya ezinkulu zothuli; Bese kungena isihlungi sesikhwama ukususa izinhlayiya ezincane zothuli; Ngemuva kokungena kusiphephetha sefilimu samanzi, isikhunta igesi izogudla ifilimu yamanzi ngaso sonke isikhathi, bese kuthi umusi onothuli umanziswe. Izongena ezansi kwesiphepho sokugeleza ngokugeleza kwamanzi bese ikhishelwa ethangini lentekenteke. Ngemuva kwezulu, amanzi ahlanzekile azophinda asebenze kabusha.
Uhlelo lokulawula ugesi: ukusebenzisa uhlelo lokulawula ikhompyutha lwakwa-Nokia Nokia, ulayini wokukhiqiza othomathikhi ngokuphelele, okonga izindleko, ikhwalithi yomkhiqizo ozinzile.
Langaphambilini I-Judah kiln -300T / D iphrojekthi yokukhiqiza -EPC iphrojekthi
Olandelayo: Judah kiln -200T / D 3 lines lines - IPC project
I-Juda kiln - amathani ayi-100 / inqubo yokukhiqiza yosuku ...
Ukubaluleka kokuThuthukiswa kweLime Lime Kiln Technology Lime okusha yizinto ezisizayo ezisemqoka nezikhiqizwayo zensimbi, ukukhiqizwa kwe-calcium carbide, ukukhiqiza okwenqabayo, ukukhiqizwa kwe-alumina. Ikakhulukazi enkathini entsha, ubuchwepheshe obusha, imikhiqizo emisha iyaqhubeka nokuthuthukisa izinto ze-calcium zisetshenziswa kabanzi. Ukuzijwayeza kufakazele ukuthi ubuchwepheshe besimanje besikhumulo sendawo yelimu empeleni buyindawo engokoqobo futhi enqamulelayo ezuzisa kakhulu amabhizinisi wensimbi nensimbi, amabhizinisi e-calcium carbide ...
11. Uhlelo lokuphakelwa komoya Ezinsukwini zanamuhla, izikhuni eziningi zikalamula ziphakela kuphela umoya ezansi, ongasatshalaliswa ngokulinganayo, futhi uthambekele kwizenzeko zokusha okuyingxenye, ukukhishwa okuyisisekelo, ukupheka kanye nokucwengwa komphetho. Umoya omkhulu wokucindezela okhiqizwe ngumlandeli wethu okhethekile womlilo ukhuphukela endaweni yokubala ngokusebenzisa indawo yokupholisa engezansi komlilo. Indawo yokupholisa empeleni iyindawo yokushintshanisa ukushisa. Ukushisa kukalamula kwehla kakhulu lapho izinga lokushisa lemvelo likhuphuka ngokushisa okuphezulu kwe-lim ...
I-Juda Kiln – Round plate i-discharger
9. uhlelo lomlotha Isimiso somshini wokwehlisa umlotha onamacala amane ukukhipha umcengezi emzimbeni womlilo ngokulinganayo nangokuhleleka emgodini wokukhipha umlotha, futhi umcako webhakede uyakhishwa eziko ngamaphayiphu amabili okukhiya. Umshini wokwehlisa umlotha onamacala amane ungamadivayisi amane okwehlisa umlotha, ancike futhi azimele. Izici zobuchwepheshe bemishini yokukhipha umlotha emaceleni amane: 1. isakhiwo esivalwe ngokuphelele esakhiwe yinsimbi yokukhipha umlotha enamacala amane nensimbi ...
Amabili Stage Lock Air Valve
10. Isistimu yokukhiya umoya Izigaba ezimbili zedivayisi ye-valve yokukhiya umoya: ingenye yezinqubo ezibalulekile ekukhiqizeni i-lime shaft fire. Imishini ejwayelekile yokususa umlotha ukumisa umoya nokukhipha umlotha, le mishini ukugcina umoya futhi ivale umlotha: ngenkathi kususwa umlotha, ngenxa yokufakwa uphawu kokushintshana kwalezi zingxube ezimbili, umoya womlilo ngeke uvuza kusuka ingxenye engezansi, engathuthukisa ngempumelelo ikhwalithi nokukhishwa kukalika. ukwakheka kwemishini: idivayisi iyinhlanganisela ...
Calcium oxide Futhi Calcium Hydroxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide, Ukwenza i-Calcium Hydroxide, Igama Lwebhizinisi LeCalcium oxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide Production Line, Ukwenza I-calcium Hydroxide,